Caafimaad - BBC News Somali
Posted at 16:25 18 Nofembar 202116:25 18 Nofembar 2021
Posted at 14:20 2 Nofembar 202114:20 2 Nofembar 2021
Dhimasho ma sababi kartaa hindhisada?
Hindhisada soo booddada ah waxaa lala xiriiriyay suuxitaanka degdegga ah, kaasoo mararka qaar khatar aad u weyn leh.
Posted at 18:53 29 Oktoobar 202118:53 29 Oktoobar 2021
4 arrimood oo kaa caawin kara in aad caafimaad iyo farxad ku noolaato
4 arrimood oo Saynisk uqeeexay oo Muhiim ah islamarkana kaa caawin kara inaad Nolol dheer oo farxad leh ku noolaato.
Posted at 13:33 24 Oktoobar 202113:33 24 Oktoobar 2021
Waxyaabaha udgoon sida cadarada ay banii'daanka isticmaalaan ayaa waxay kamid yihiin waxyaabaha uu isbaddalka u horseedayo garaadka macmalka ah ee loo yaqaanno Artificial Intelligence (AI) si tayadooda iyo waxtarkooda loo xoojiyo.
Posted at 10:23 14 Oktoobar 202110:23 14 Oktoobar 2021
'Hooyada' unugyadeeda ay kaalinta wayn ka qaateen daweynta cuduro badan
Henrietta Lacks Waxay ahayd gabadh madow ah oo u dhalatay Mareykanka, taas oo unugyadeeda ay kaalin wayn ka qaateen guusha daweynta casriga ah.
Posted at 13:35 13 Oktoobar 202113:35 13 Oktoobar 2021
Posted at 18:18 11 Oktoobar 202118:18 11 Oktoobar 2021
Waa cudur horseeda in aashatada Uric ay ku badato dhiigga banii'aadanka taas oo kenta in maddada Purine ay gasho jirka.
Posted at 16:23 11 Oktoobar 202116:23 11 Oktoobar 2021
Jacinta Wambu waa gabadh 24 jir ah oo ku nool dalka Kenya waxay sheegtay in cabsi ay lasoo deristo mar kasta oo aragto ragga xitaa waxaa xilliggaas ku adag inay hadasho.
Posted at 10:25 10 Oktoobar 202110:25 10 Oktoobar 2021
Nadaafadda afka waa dhibaato ay khubarradu ku sheegeen inay saameyso ku dhowaad 25 boqolkiiba bulshada caalamka. Waxaa jira waxyaabo badan oo dhibaatadan sabab u ah, balse intooda badan waxay la xiriiraan nadaafadda afka.
Posted at 17:52 8 Oktoobar 202117:52 8 Oktoobar 2021
Duqnimada waa "cudur" waana la daweyn karaa
Waayeelnimadu waa dhab oo waa lama huraan, waana halka uu qof walba ku dambeyn doono hadii uu nool-yahay balse hidde -sidaha uu aainsan yahay seenisyahan David Sinclair ayaa taas beeniyay.
Bog 1 of 11